मान्छेको जन्म हुदा सास हुन्छ तर कुनै नाम हुदैन र मृ ‘ त्यु हुदा नाम त हुन्छ तर सास हुदैन , यहि सास र नामको बिचको यात्रानै जीवन रहेछ। – Complete Nepali News Portal
मान्छेको जन्म हुदा सास हुन्छ तर कुनै नाम हुदैन र मृ ‘ त्यु हुदा नाम त हुन्छ तर सास हुदैन , यहि सास र नामको बिचको यात्रानै जीवन रहेछ।
समाजसेवी, सामाजीक अभियन्ता दिक्षा चापागाई ज्यु को सामाजिक संजाल फेसबुकमा मन छुने स्टाटस :
मान्छेको जन्म हुदा सास हुन्छ तर कुनै नाम हुदैन र मृत्यु हुदा नाम त हुन्छ तर सास हुदैन ,यहि सास र नामको बिचको यात्रानै जीवन रहेछ।
रगतको नाता, जन्मको नाता भन्दा कहिले काहि भावनाको नाता पनि बलियो हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो । जन्मदिनेले फालेर गए , छाडेर गए पनि आमाको न्यानो काखको माया जिवन्त राखेकी छु” ~ दिक्षा चापागाई
“आजको यो दिनमा हामीले सबै सबैले केहि अविष्मरणीकाम गरौ । राम्रो काम गरौ । आफन्त भन्दा, परिवार भन्दा बाहिरको मान्छेको लागि गरौ । आफनो लागि, पत्नी, छोराछोरी, बाबुआमा, परिवार, आफन्त, साथी भाईको लागि यति धरै समय दिई सकियौ । आज एक दिन विल्कुलै बाहिरको मान्छेको लागि दिई हेरौन । कस्तो अनुभव हुने रहेछ अनुभव गरौ न । मेरो घर , मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरी आमा, मेरो बाबा, मेरो जग्गा, मेरो गाडी, म अमेरिका जादैछु , बेलायत, युरोप जादैछु, व्यापार गर्न , पढन,घुम्न भन्दा भन्दै आधा उमेर ढल्की सकेछ हाम्रो ।
अनुहारमा अनगिन्ती मुजा पर्न थालेछन, दाँत हल्लीन थालेछन, कपाल फुल्न थालेछ , आफन्तले छिः छि र दुर दुर गर्न थालेछन । हिडढुल गर्न लाई पनि लौरो चाहिन थालेछ । हिजोका रमझम, खुशीका दिनहरु, साथी भाई ईष्टमित्रहरु सँग खाई खेलेका दिनहरु पनि संझनामा मात्र सिमित हुन थालेछन । चिनेका ले पनि नचिने झै गर्न थालेछन! एक छिन एकान्तमा ठण्डा दिमागले जिवनलाई फर्केर हेरौ त, कतै धिक्कारन त मन लाग्दैन ? पश्चाताप त हुदैन हामीलाई ? आज एक दिनको तन मन धन सबै तिम्रो लागि दिए मैले , तिमी मेरो कोहि पर्दैनौ । यति प्रण बाट दिनको शुरुवात गरौ “
धन्यबाद ! दिक्षा चापागाई, पवित्र समाज सेवा नेपाल, बुढानिलकण्ठ ४ , काठमाण्डौ, नेपाल। फोन ९८५१०६००८६
सीधा कुरा बिबादमा आयो , तिमी किन नबोलेको भनेर प्रस्नहरु...